Zefoy Apk Dhawunirodha Ye Android [TikTok Liker] - Luso Gamer
Zefoy Apk Dhawunirodha Ye Android [TikTok Liker]
TikTok yagara ichionekwa senzvimbo inobata maziso kune vanoda magariro. Pakutanga, makwikwi aionekwa seakaderera pane aitarisirwa. Nekudaro, ikozvino makwikwi awedzera uye tichifunga vateveri vekare pano taunza Zefoy Apk.
Zvechokwadi, the Yemahara Vateveri Tool inoonekwa sepamhepo yakachengeteka chikuva. Iko vanoda TikTok vanogona kunakidzwa nekuwana kusingaperi vateveri, vanoda uye makomendi emahara. Zvese zvavanoda kuita kungo dhawunirodha yazvino vhezheni yeApk.
Izvo zvinosvikika kuwana kubva pano nekudzvanya kumwe chete. Zvakadaro, maitiro ekumisikidza uye mashandisiro echishandiso ane hunyanzvi. Asi usazvinetse nezvazvo nekuti pano tichataura mamwe ematanho anodiwa. Kuti uise Zefoy Dhawunirodha ndapota tinya pazasi yakapihwa link.
Chii chinonzi Zefoy Apk
Zefoy Apk ndeye yepamhepo bato rechitatu rinotsigirwa TikTok chikuva. Iko nhengo dzakanyoreswa dzinotenderwa kunakidzwa nekusingaperi pro masevhisi mahara pasina kunyoreswa. Kunze kwekugadzira vateveri, iyo puratifomu inofarirwa zvakare kugadzira MaLike uye Comments.
Pane nzira mbiri dzekutanga dzekuwana masevhisi akafanana. Kune akawanda online akawanda akasiyana premium mapuratifomu anowanikwa mahara. Avo vanoti vanopa masevhisi akafanana muchokwadi pasina kunyoreswa kana kuda mvumo.
Nekudaro muchokwadi, iwo mapuratifomu ari kukumbira kunyoreswa kweprimiyamu. Ehe pasina kutenga pro rezinesi hazvigoneke kuti vashandisi veandroid vawane zviwanikwa. Iko fungidziro yepamhepo yerezinesi repro inogona kudarika mazana emadhora.
Kunyangwe vanoda TikTok vanogona kunakidzwa nemasevhisi akafanana kuburikidza nezviteshi zvepamutemo. Asi mari yacho inodarika mazana emadhora. Izvo hazvigamuchirwi zvachose kune vatsva nevashandisi vepakati. Saka tichifunga nezvechikumbiro, vagadziri vakaunza Zefoy Android.
zera 3.7 MB
Package Zita com.themysteryman8308.VipTools
Muchokwadi, iyo application ndeyemahara kurodha kubva papuratifomu yepamutemo. Zvakadaro vashandisi veAndroid vanogona zvakare kudhawunirodha iyo yekutanga vhezheni yeApk faira kubva kune yedu webhusaiti. Ingobaya pane yakapihwa link uye unakirwe nekurodha yakananga app faira.
Paunenge wapedza kurodha, zvino tanga iyo yekuisa maitiro. Zvino shanyira iyo nharembozha uye tanga yakaiswa chishandiso mahara. Rangarira vashandisi vanogona kukumbira kupinda muapp kuburikidza nechrome login system.
Kana iwe ukabudirira kupedzisa iyo login maitiro, saka unotenderwa kunakidzwa nepro zviwanikwa zvemahara. Mune zvimwe zviitiko, webhusaiti inogona kutadza kushanda nemazvo uye kuratidza zvimwe zvikanganiso. Mune mamiriro akadai isu tinokurudzira vashandisi veandroid vatangezve application.
Iwo makuru masevhisi anowanikwa kuti awane mukati mepuratifomu anosanganisira Likes, Maonero, Vateveri uye Maonero. Ese masevhisi aya anosvikika zvakananga kushandisa kubva kune main dashboard. Mukati medashboard huru, vashandisi vanokumbirwa kuti vasimbise iyo profile link.
Saka iyo application inobudirira mukutora iyo account account. Ikozvino ichapenya kunze masevhisi makuru, ingodzvanya pane akakosha masevhisi uye unakirwe nekugadzira mahara vateveri. Saka iwe unoda iwo ekutanga maficha uye wakagadzirira kunakidzwa wobva waisa Zefoy App.
Iyo apk faira yakasununguka kurodha pasi.
Kubatanidza iyo app kunopa akasiyana pro masevhisi.
Izvo zvinosanganisira Anofarira, Vateveri uye Makomendi.
Maonero anogona zvakare kugadzirwa kuburikidza nepuratifomu.
Hapana chaicho chechitatu shambadziro vanobvumidzwa.
Kunyoresa kunoonekwa sekumanikidzwa.
Iyo App interface iri nyore.
Menyu yakadzama inowedzerwa kuitira rubatsiro rwemushandisi.
Maitiro ekurodha Zefoy Apk
Kuti tive nechokwadi chekuchengetedzeka nekuvanzika kwemushandisi, takahaya nyanzvi. Kunze kwekunge timu yehunyanzvi ine chokwadi nezve kushanda zvakanaka kweApk. Iyo yakananga Apk faira haizombofa yakapihwa mukati mekurodha chikamu. Kuti utore iyo yakagadziridzwa vhezheni yeApk ndapota tinya pazasi apa link.
Iyo Apk faira yatove yakaiswa pamusoro akasiyana android smartphones. Uye isu hatigone kupupurira chero dambudziko rakananga mukati. Nekudaro, isu hatimbofa tiri vedzi copyrights, kana paine chinokanganisa panguva yekushandisa, isu hatisi kuzova nemutoro.
Webhusaiti yedu yakazara nematurusi akasiyana eandroid, ayo anogona kupa akafanana masevhisi emahara. Avo vanofarira kuisa iwo mamwe maturusi ehukama vanofanirwa kutevedzera maURL. Zviri Viptools Apk uye Clapper App Apk.
Saka iwe uri wekutanga paTikTok uye uchinetseka kuwana mhinduro yakanaka kubva kune vanoona. Asi kutadza kuwana mhinduro yakanaka nekuda kwekushaya zvekushandisa. Ipapo usazvinetse nekuti pano tadzoka neZefoy Apk. Izvo zvakasununguka kuisa uye hazvidi kunyoreswa.
Categories Tools, Apps Tags Vateveri Vemahara, Zefoy Apk, Zefoy Apk Android, Zefoy Apk Download, Zefoy App Post navigation
World Bhokisi Apk Dhawunirodha Ye Android [God Game]
Hupenyu Hwezuva Nenyika YeNyika Yangu Apk Dhawunirodha Ye Android [RPG Game]